पृथ्वी सुब्बाविरुद्ध कार्यकर्ताको नाराबाजी-अन्तरघाती होसियार! « Dainik Online
पृथ्वी सुब्बाविरुद्ध कार्यकर्ताको नाराबाजी-अन्तरघाती होसियार!
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १० : ०४
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयर सहित ९ वडाध्यक्ष चुनाव जितेको एमालेले बुधबार विजयी र्‍याली निकाल्यो।
र्‍यालीअघि शहिदचोकमा शीर्ष नेताहरुको सम्बोधन थियो। वक्ता थिए, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी। अधिकारीले भाषण गरेर निस्किए। अनि भाषण गर्न आइपुगेका पृथ्वीसुब्बालाई भने कार्यर्ताले नाराबाजी गर्दै बिरोध जनाए।
‘अन्तरघाती मुर्दावाद, अन्तरघाती होसियार,’ उनीहरुको नारा थियो, ‘अडियो भिडियो काण्ड सार्वजनिक गर्।’ उनीहरुलाई पोखरामा मेयर चुनाव हार्नुमा प्रमुख कारण पृथ्वीसुब्बा गुट भन्ने लागेको छ। केही समयअघि सोही गुटका केही नेताहरुको अडियो सार्वजिक भएको थियो । त्यसपछि घटना झनै रोचक बन्यो।
अहिले कास्कीमा गुरुङ र अधिकारी गुटको टकराव छताछुल्ल भएको छ । यसअघि टिकटको समयमै दुई गुटबीच निकै अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा भयो । पिएस गुटबाट टिकट पाएका दीपक पौडेललाई पूरानो सुन चोरीको भिडियो सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरेर अधिकारी गुटकै नेताहरुले टिकट खोसेको आरोप लगाइएको छ।
पछि अधिकारी गुटका कृष्ण थापाले टिकट पाए। तर चुनाव जित्न पाएनन्। प्रमुख कारणः एमालेभित्रको अन्तर्घातलाई मानिएको छ।
काठमाडाैं । ज्योति विकास बैंकले बुधबार ललितपुरको टिकाथलीमा ११८औं शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ। महालक्ष्मी
सेप्टेम्बरमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलेको अष्ट्रेलिया भ्रमण
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने भएको छ ।नेपाल क्रिकेट
असार १५ को परम्परा मनाइयो दहीचिउरा खाएर
कृषकलाई तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह
बाढीले एउटा पुल बगायो, एउटामा क्षति, विस्थापित घर फर्कंदै
गल्ती सुधारे धान निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिन्छः अध्यक्ष ओली
शिक्षण अस्पातालले बीमा सेवालाई निरन्तरता दिने